Sawirro Cusub: Maxaa kusoo kordhay xil wareejinta maanta ka dhacday Villa Somalia | Dayniile.com
Sawirro Cusub: Maxaa kusoo kordhay xil wareejinta maanta ka dhacday Villa Somalia
Feb. 16 WARKA MAANTA Comments Off on Sawirro Cusub: Maxaa kusoo kordhay xil wareejinta maanta ka dhacday Villa Somalia
Muqdisho (Deyniile Media)-Warar dheeraad ah ayaa waxa uu kasoo baxayaa munaasabada xil wareejinta goordhow ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan Xarunta Madaxtooyada Somalia.
Munaasabadaan ayaa waxaa xilka ku wareejinaayay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo uu la wareegaayay Madaxweynaha JFS Maxamed C/llahi Farmaajo.
Waxaana ka qeyb galay Masuuliyiin kala duwan iyadoona uu wareejiyay Madaxweyne Xasan Sheekh dhammaan Xarunta Villa Soomaaliya iyo Agabkii yiilay.
Waxyaabaha lagu wareejiyay Madaxweynaha cusub ayaa waxaa kamid ahaa Dukumiintiyo ay ku qoran yihiin Sirta Qaranka, diiwaanka Hantida oo ay kamid yihiin Gaadiidka, Hubka, Dhaqaalaha ku harsan Qasnada DFS, Liiska Shaqaalaha DFS iyo dhammaan agabyada yaalla Madaxtooyada.
Madaxweynaha ayaa la gudoonsiiyay dhammaan diiwaanka Qaranka, waxa uuna soo dhaweeyay sida geesinimada leh ee uu Xasan Sheekh ku wareejiyay xilka.
Madaxweynaha waxa uu goobta ka sheegay in xilka uusan aheyn wax lagu farxo, balse Mas’uul waliba uu yahay mid ku dhiiranaaya qabashada xilka si uu sabab ugu noqdo isbedel ku imaada dalkaani dhibta saaxiib u noqday.
Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale, sheegay in si lamid ah sida xilka loogu wareejiyay uu isna u wareejin doono iyadoo ay kalsooni ku jirto.
← Dhageyso qudbaddii qiirada laheyd ee uu jeediyey Farmaajo xil wareejinta kadib
Farmaajo oo hadal ay ku farxeyn shacabka Soomaaliyeed ka sheegay joogitaanka AMISOM →